Toamasina : filohan’ny filankevitra Razafimanana | NewsMada
Toamasina : filohan’ny filankevitra Razafimanana
Niverina eo am-pelatanan’ ny mpanolotsaina voafidy amin’ny Mapar ny filohan’ny filankevitry ny Tanàna, raha nisintaka tamin’izany nandritra iny taon-dasa iny. Norombahin-dRakotoarivelo Solofo Ginah izany teo aloha, saingy, voatery nametra-pialana ny tenany noho ny tsindry nahazo azy vokatry ny ady ifanaovany efa an-taonany amin’ny
ben’ ny Tanàna, Ratsiraka Elysée, niafara tamin’ny fampidirana am-ponja ny fianakaviany. Natao ny alatsinainy 26 febroary lasa teo ny fivoriana nifidianana ny ho filoha sy ny birao hitarika indray ny filankevitra kaominaly vaovao. Roa ireo kandidà nifaninana ka natolotry ny Tim notohanan’ny HVM sy ny MTS ny Dr Rakotomanana Gervais. An’ny Mapar kosa Razafimanana Jean Christian, nahazo ny 11 tamin’ny mpanolotsaina miisa 19 mpifidy. Valo kosa ny vaton’ny Tim. Voafidy ho filoha fanindroany indray izany Razafimanana Jean Christian. Tonga teto Toamasina koa ny filoha teo aloha, Ravalomanana, ary nihaona sy namory ireo mpanolotsaina dimy voafidy amin’ny Tim.
Tim nivadika nanohana Mapar
Nisy baiko nomen’ny filohan’ny Tim mba handaniana ny Dr Rakotomanana Gervais ho filohan’ny filankevitry ny Tanàna. Nanome tanana izany ny mpanolotsaina roa avy amin’ny MTS sy ny HVM roa ary iray avy amin’ny tsy miankina ka hifidy an-dRakotomanana Gervais. Nivadika nanohana ny kandidàn’ny Mapar anefa ireo Tim sasany. Fantatra koa fa efa mivaky sy te hivadika ho Mapar ireo mpanolotsainaTim. “Notohananay HVM sy MTS izy, tsy noho ny loko politikan’ny dokotera fa ny traikefany heverina hanala ny fahoriana sy aretina misy amin’ny kaominina Toamasina ankehitriny, saingy sarotra ampiana sy omena tanana izy ireo ka izao ny vokany« , hoy mpanolotsaina avy amin’ny tsy miankina sy ny HVM ary ny MTS.